बारा : सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु, एक घाइते - Nepal Post Daily
बारा, १३ माघ । बारामा सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा खोटाङ बस्ने ३६ वर्षीय लाल बहादुर पाण्डेको ज्यानगएको हो ।
बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा न. ९ छातापिपरा भित्री सडकखण्डबाट बीरगन्ज–पथलैया सडकखण्डस्थित छातापिपराबाट निस्कने क्रममा बा.३ क ३७३६ नम्बरको मिनी ट्रकले पैदल यात्रु पाण्डेलाई ठक्कर दिएको थियो । मिनी ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भई उपचारको लागि नारायणी अस्पताल बीरगन्ज ल्याइएको थियो ।
उपचारको क्रममा उनको राति ८ बजेर १० मिनेटमा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिए । सवारी चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
त्यसैगरी, बीरगन्ज–कलैया सडकखण्डमा भएको सवारी दुर्घटनामा कलैया उपमहानगरपालिका–५ घुसुकपुर बस्ने ४८ वर्षीय निर्मला देवी सोनार घाइते भएकी हुन् । सोमबार साँझ कलैयातर्फ जाँदै गरेको ना.२ त.२८२८ नं. को ट्याक्टरले पैदल हिँडिरहेकी निर्मलालाई ठक्कर दिँदा टाउको लगायत शरीरको विभिन्न भागमा चोट लागि उनी घाइते भएकी थिइन् ।
उनलाई उपचारको लागि नरसिंह अस्पताल कलैयामा पठाइएकोमा अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ । चालक बारा प्रसौनी गाउँपालिका–५ बन्जरीया टोल बस्ने २२ वर्षीय मनोज कुमार राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
Previous articleतीन दिने प्राथमिक उपचार पुर्नताजगी तालिम शुरु
Next articleबरामद मदिरा नष्ट